Afhayeenkii uu Macalinkiisa Siyaasaddu Ahaa Maxamuud Xaashi, Musharax Xildhibaan Baarlamaan Maxamuud Warsame oo Kala Garan-la Gabilay iyo Sanaag Midka uu ka Sharaxan yahay!!!
Saturday March 27, 2021 - 18:59:07 in Wararka by Super Admin
Hargeysa(Xogreebnews)- Afhayeenkii hore ee ku fashilmay Madaxtooyada Somaliland, Maxamuud Warsame, ayaa todobaadkan qori Dable kula dhex-wareegaya Deegaanka Gabilay, isagoo iskaga dab-qaadaya isku dirka iyo diro-diraalaynta Siyaasiyiin Dabac iyo dani Siyaasadeed ku loolamaya, iskuna deegaan ah.
Lama ogga Sababta dhabta ah iyo danta ugu jirta Siyaasigan raad-baraadka ah, oo hada ay dayacan tahay danihiisii Siyaasadeed, maadaama oo u yahay Musharax Xildhibaan Baarlamaan oo sida uu sheegay ka tartami doona Gobolka Sanaag.
Afhayeen hore, Maxamuud Warsame, ayaa ku fashilmay Xilkii afhayeenimo ee Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u Magacaabay, isagoo mudo dheer ahaa afhayeen dibad-wareeg ah, isla markaana aan gelin Madaxtooyada, balse xarumaha kale ee dawlada ku maxaafsada mansabka afhayeenimo Madaxweyne.
Mudo uu Afhayeen hore Maxamuud Warsame ahaa Afhayeen dibad-wareega Kadib, waxay madaxtooyadu u samaysay inuu yeesho Dabac Xildhibaanimo, isagoo la yidhi isku soo sharax Xildhibaan Baarlamaan deegaanka Sanaag.
Si kastaba ha ahaatee, Musharax Xildhibaan Baarlamaan Maxamuud Warsame, ayaa ahaa Arday uu Macalin siyaasadeed u yahay Siyaasi Maxamuud Xaashi oo ku fashilmay inuu mar kale la qaan-qaado Siyaasada Xisbiga Kulmiye oo mudo xileedkiisi uu ahaa 7 sano Wasiir, hase-yeeshee markii uu waayey damac aan jiho lahayn, waxa uu noqday Dibad-wareeg. Waxanu hada dib u urursanaya ardaydiisi uu Siyaasada soo geliyey oo u kamid yahay Siyaasigan raad-baradka ah ee Maxamuud Warsame.